15 Jees Jeeg Oo Bilaash Ah Oo Loogu Talo Galay Kaararka Ganacsi Ee Naqshadaynta Minimalist | Abuurista khadka tooska ah
Melissa Perrotta | | Design Graphic, Photoshop, habyaalada
Naqshadeynta qaabdhismeedka ayaa ah qeyb ka mid ah xirfadaha oo gacan ka geysta sameynta wax walba sida ugu fiican. Sababtaas awgeed, raadi U soo bandhig walxaha garaafka habka ugu hal abuurka badan suurtogal ah in lagu soo jiito kormeerayaasha isla markaana loo helo inay la falgalaan nashqadda.
Tan awgeed, ka jees jees preformatted. Kuwani waa sawirro wax laga beddeli karo oo lagu dhisay barnaamijyada wax-ka-beddelka, kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho waxyaabaha ku jira oo aad u habeyso sida aad jeceshahay. Dareenkaan, naqshadeynta ayaa soo faragalinaysa qaab dhismeedka muuqaalka shirkadeed ee ururada.
ka kaararka ganacsigu waa mid ka mid ah waxyaalahan muhiimka ah shirkadaha. In kasta oo maanta isticmaalkeedu yaraaday adeegsiga shabakadaha bulshada; kuwani wali waa mid ka mid ah alaabooyinka aadka looga codsado naqshadeeyayaasha.
Waa tan aruurinta 15 jees jees kaarka ganacsiga ah tayo sare leh. Iyagu waa faylasha PSD waxayna u oggolaan doonaan tafatirka degdegga ah ee waxyaabaha ku jira.
1 Midab adag kaarka ganacsiga ganacsiga
2 Kaarka taagan oo leh casaan casaan
3 Kaarka yar-yar ee leh midab labalaab ah
4 Xirmooyinka kaararka oo ku dul yaal geesta
5 Kooxda kaftanka kaftanka kooxda
6 Kaarka ganacsiga ku jees jeesi shay qurxin ah
7 Shaabad ku dhufashada kaarka ganacsiga
8 Kaarka jees jeeska leh laanta geedka
9 Kaararka ganacsiga ee kala duwanaanta beige
10 Kaadh shaqsiyeed fudud oo asalkiisu kareem yahay
11 Kaar Ganacsi Minimalist Midab leh & Baqshad baqshad
12 Kaftanka kaararka oo leh xuduudo wax laga beddeli karo
13 3 kaar baqshad laba jibbaar ah
14 Cadaadis cad oo loogu talagalay kaarka ganacsiga
Midab adag kaarka ganacsiga ganacsiga
Halkan waxaan ku haynaa fayl ku jira PSD oo u oggolaanaya in la abuuro bandhigyada kaarka ganacsiga midabka adag. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad wax ka bedesho midabka shaandhada oo aad wax ka bedesho canaasiirta oo waxaad horey u laheyd kaarkaaga midabka
Kaarka taagan oo leh casaan casaan
Kaarka shakhsi ahaaneed ayaa lagu jeesjeeyaa qaab toosan aad u fudud laakiin asal midab leh.
Kaarka yar-yar ee leh midab labalaab ah
Jees jeeskani wuxuu ka kooban yahay a xidhmooyin kaararka ganacsiga 3 ah on midab laba midab leh. Kuu ogolaanayaa inaad tafatirto dhammaan lakabyada oo aad beddesho midabka asalka.
Xirmooyinka kaararka oo ku dul yaal geesta
Jees jees aad u xiiso badan oo leh qaab u dhigma isbeddellada ugu dambeeyay. La ciyaar isaga dheelitirka kaarka dhinaca midabada ka soo horjeedka.
Kooxda kaftanka kaftanka kooxda
3000 x 2250 px hore u xallinta 300dpi. Waxay sidoo kale keenaysaa ikhtiyaarka lagu isticmaalo hoosta laba-laab ama qalab kala duwan.
Kaarka ganacsiga ku jees jeesi shay qurxin ah
Soo bandhigidani waa mid ku habboon mashruucyada la xiriira naqshadeynta gudaha, qalabka guryaha ama farshaxanka. Kuu ogolaanayaa inaad u isticmaasho kaarka on asalka midab double, cad ama shayga image ah.
Shaabad ku dhufashada kaarka ganacsiga
Naqshadeeyay Athos Pampa mockupkaan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto warqad dahabi ah oo midabbo kala duwan leh. Adeegso asalka ama midabka aad rabto.
Kaarka jees jeeska leh laanta geedka
Faylka PSD waxaad kala soo bixi kartaa hore ee mockup ka sokow font loo isticmaalo. Waxaad ka heli doontaa in loo qaabeeyey gabi ahaanba lakabyo si aad si fudud ugu beddeli karto canaasiirta.
Kaararka ganacsiga ee kala duwanaanta beige
Xor ah Krisjanis Mezulis oo aad uga soo raran Qaabka Chanel.
Kaadh shaqsiyeed fudud oo asalkiisu kareem yahay
Este qaab xarago leh oo ugxan ah kuu ogolaanaya inaad soo bandhigto nooc kasta oo kaar ganacsi ah.
Kaar Ganacsi Minimalist Midab leh & Baqshad baqshad
Jaantuskan waxaad ka heli kartaa walxaha kala duwan ee qalabka xafiisyada inaad soo bandhigto naqshadahaaga. Waxay leeyihiin midabyo casri ah iyo naqshado yar.
Kaftanka kaararka oo leh xuduudo wax laga beddeli karo
Tani bilaash ah taas Sam ayaa sawiray ayaa ka tagay Behance ayaa ku habboon soo bandhigida xirmooyinka kaararka. Iyada oo aad ku beddeli karto midabka cidhifyada kaararka oo aad codsan karto miirayaasha midabka.
3 kaar baqshad laba jibbaar ah
Iyada oo jees jees midab leh ayaad ku soo bandhigi kartaa 3 xulashada kaarka ganacsiga waqti isku mid ah. Cabirka feylku waa 3000 × 2000 pixels.
Cadaadis cad oo loogu talagalay kaarka ganacsiga
Tani waa jees jees ku habboon nooc kasta oo bandhig ah. Iyada oo aad, waxaad dooran kartaa in aad isticmaasho asalka cad cad ama asalka a textured.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 15 jees jees ah oo loogu talagalay kaararka ganacsiga oo leh naqshad yar
Xaqiiqda ka dambeysa mashruuc naqshadeynta ah